Akanaka Kwazvo Stephen King Mabhuku aunogona Kuverenga | Zvazvino Zvinyorwa
Stephen King ndomumwe wevanyori vanonyanya kuzivikanwa pasi rese. Iye anozivikanwa pasirese nekuda kwemabhuku ake anotyisa, asi chokwadi ndechekuti akaitawo nhanho dzake dzekutanga mune mamwe mabasa ayo, kunyangwe ari pamuganhu wenyaya iyi, asiri anotyisa zvakadaro. Iye ndiye munyori weanopfuura makumi matanhatu enganonyorwa, uye izvo hazvisi kuverenga ngano, mapfupi manyoro, asiri-echokwadi mabhuku, zvinyorwa uye mamwe marudzi ezvinyorwa zvinyorwa. Asi, kunyangwe paine izvi zvakasiyana siyana, zvinofanirwa kutaurwa kuti vangangove vese vaverengi vanobvumirana nazvo ndeapi mabhuku akanakisa aStephen King.
MuActualidad Literatura isu takurudzira kukuswededza padhuze neapi ari akanakisa Stephen King mabhuku uye nei ari. Saka kana iwe uchida kuvaziva, ita shuwa kuti uverenge kusangana kwatinokugadzirira iwe.
1 Ndiani stephen king
2 Akanakisa Stephen King Mabhuku
2.1 Stephen King: Izvo
2.3 Stephen King: Sezvandinonyora
2.5 Stephen King: Iyo Rima Shongwe
2.7 Stephen King: Mubati weRoto
Ndiani stephen king
Stephen King akaberekwa muna 1947 muPortland, Maine, uye ndiye mumwe wevanyori vanozivikanwa kwazvo vekuAmerican, kunyanya nekuda kwenhoroondo dzake dzinotyisa uye dzakavanzika. Vanenge vese vakashandurwa (kana vachazove mune ramangwana) kumitambo yeterevhizheni kana cinematographic mafirimu uye mabhuku avo akashandurwa pasi rese.
Ehe saizvozvo, haana kutanga kubudirira kubva pakutangaYakanga isati yasvika makore makumi mapfumbamwe kuti yakatanga kubudirira. Ndeipi yaive bhuku rako rekutanga? Zvakanaka, wekutanga aive Carrie, inoverengeka iyo iye munyori aisatenda uye zvakadaro, nekuda kwemukadzi wake, akaipedza ndokuitumira kune muparidzi. Izvi hazvina kubudirira kwazvo pakutanga (muparidzi wacho akamupa mari shoma yenguva yake), asi chokwadi ndechekuti akabudirira uye zvakamuita kuti afunge kuzvipira chete mukunyora.
Nekudaro, mamwe mabhuku enganonyorwa akadai seChakavanzika chaSarem's Lot, kana kuti The Shining, imwe yeanonyanya kuzivikanwa, aive achibuda.
Nekufamba kwenguva, enganonyorwa dzake dzaikwezva kutariswa, kwete kwevabudisi nevaverengi chete, asiwo kwevagadziri, avo vakatanga kufunga nezvekuchinja kwenhau dzake mumabhaisikopo kana kunyange akateedzana. Uye izvo zvakaita kuti ibudirire zvakanyanya.
Tichifunga nezve nguva yese iyo munyori anga achinyora, zvakajairika pamabhuku ake ese pane mamwe anoonekwa semabhuku akanakisa aStephen King.
Uye ndezvipi izvozvo? Zvakanaka, izvi zvinotevera:
Stephen King: Izvo
Nderimwe remabhuku rine vaverengi vanonyanya kufarira. Asi zvakare kune avo avo, vasina kuverenga iyo inoverengeka, vakafadzwa nekugadziriswa kwakaitwa mufirimu. Nekuti hongu, kune akati wandei. Kashoma kuti ivo vanowanzo gadzira inopfuura imwechete kugadziriswa kwenoverengeka, asi naIyo Stephen King akabudirira, uye nezvakanaka kwazvo mhedzisiro.
Mune ino kesi, Ine "chimwe chinhu" chausingawane mune mamwe mabhuku. Nekuti isu tiri kutaura nezvenyaya yevakuru, asi ivo protagonists vana. Pamusoro pezvo, rangano rinotenderera pavari rizere neyakajairika, inoshamisa uye hongu, mamiriro ezvinhu anotyisa.
Uye isu hatigone kukanganwa akaipa, imwe yeaya anonyatsotsanangurwa nemunyori. Uye ndezvekuti marongero anorarama uye marondedzero aanokuita anoita kuti urarame kutya nekutyisa munyama yako.
Ndiani asingazive Kupenya? Kana iwe uri anotyisa anoda, zvakajairika kuti iwe uzive ino novel. Iyo ndeimwe yedzinonyanya kudavirwa dzimba dzinokatyamadzwa (uyezve chikamu chechipiri chakaitwa munguva pfupi yapfuura iyo yakaedza kudzokorora mamiriro eiyo yekutanga bhaisikopo).
Pakati pebhuku rakanakisa raStephen King, izvi zvinofanirwa kunge zviri a zvinotenderwa nekuda kwenzira iyo munyori anoisa kutya mumuviri wako. Asi zvakare, kuti uone kuti protagonist inochinja sei. Nekuti zvinobva mumabhuku auri kuenda kunoona kuti zvinoshanduka sei kuburikidza nemapeji uye zvinodzikira mukupenga, ndoda usingade, asi uchitungamira munyori neruoko.
Stephen King: Sezvandinonyora
Sezvatakakuudza kare, Stephen King haasi iye chete anotyisa munyori. Kana iwe uchifunga kuti saka unenge wakanganisa zvakanyanya sezvo, pakati pebhuku rakanakisa naStephen King, ndiAs Ini Ndichinyora, rimwe remabhuku akanakisa kune avo vanoda kuzvipira kunyora.
Uye ndezvekuti iye munyori anoedza kufunga nezvekuti ave sei munyori akabudirira zvaari, achipa ruzivo rwusingazivikanwe kusvikira zvino nezvemabasa ake, asiwo mazano nezano kune avo vanoda kuve vanyori vanobudirira.
Sezvatakakuudza kare, Carrie yakanga iri bhuku rekutanga raStephen King. Uye akaitei? Uzvirase nekuti ndanga ndisingavimbe naye. Nekudaro, mukadzi wake akainunura, uye isu tinofungidzira kuti akaiverenga kuti gare gare inyengetedze murume wake kuti aipedze uye atumire kune muparidzi. Uye tenda kunaka kwaakaita.
Iyo nyaya inotarisana nemusikana anoshungurudzwa newaanodzidza navo kuchikoro chesekondari. Uye zvechokwadi, pane inouya nguva apo iye anokudziridza masimba uye otanga kuashandisa iwo kutsiva kune zvese zvavakaita. A classic uye imwe yeakanakisa Stephen King mabhuku.
Stephen King: Iyo Rima Shongwe
Pamwe, Iyo Rima Shongwe nderimwe remabhuku akanakisa aStephen King. Uye chimwe chinhu chisingazivikanwe nevakawanda ndechekuti chakavakirwa panhetembo yakapusa. Hongu, kubva mudetembo repakati nepakati, King akaburitsa saga rakaumbwa nemabhuku akati wandei.
Yekutanga, inova iyo inotanga saga, inogona kuve imwe yeanorema kuverenga, asi kana ukapasa iyo "yakaipa pfuti", kubva kune wechipiri haugone kumira kuiverenga. Ehezve, tinokurudzira kuti uve navo vese padhuze nekuti, sekutaura kwedu, hausi kuzopedzisa imwe usati watove neinotevera muruoko rwako kuti usarasikirwe nechero chinhu chinoudzwa.
Mumabhuku aya iwe uchawana kutya, senguva dzose mumunyori, asi zvakare zvakavanzika, hushamwari, rudo ...
Kune chero munyori, chokwadi ndechekuti Nhamo ingango fanirwa kuverenga. Uye ndezvekuti, kana iwe ukaona, mashoma mabhuku ane munyori se protagonist. Dzimwe mhando dzehunyanzvi dzinogara dzichisarudzwa, pamwe padhuze nevaverengi vanoverenga iwo marudzi emabhuku.
Asi mune ino kesi, King akasarudza kuisa munyori uye fan yeuyu. Uye nazvino zviitise kune yakanyanyisa. Uye apa iwe unogona kuona kuti hukama "hune hutano" hunogona kutsveyamiswa sei uye hunotungamira mukutyisa kukuru.
Stephen King: Mubati weRoto
Kana iwe waona iyo bhaisikopo iwe unogona ikozvino kugadzirisa patsva zviyeuchidzo zvako nekuti bhuku racho harina poindi yekuenzanisa neyekugadzirisa kwavakaita. Iye Dreamcatcher nderimwe remabhuku akanakisa aStephen King uye ndizvozvo inofungidzira nenzira isinganzwisisike mumifungo yeva protagonists, panguva imwechete iyo inotipa nyaya yepakutanga.
Uye zvakare, isu tinokuudza iwe kuti pane dzimwe nguva vanogona kukuyeuchidza nezvevamwe vakaita saMutorwa Zvinhu kana Iyo Gooni, mupfungwa yeimwe yakasarudzika hunhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Akanakisa Stephen King mabhuku
Iyo yakareba kufamba uye kumakuva emhuka
King ndiye mupenyu muenzaniso iwo mhando, kuzvipira uye tarenda zvakare zvine zvemabhizimusi mhedzisiro. Iye anonyanyisa kunyora uye kubudirira kwake mukutengesa kunoita kuti vanhu vazhinji vamuzive.